na - abanye na njikọ nkwonkwo obere ọla kọpa
Mgbidi ike zuru oke dị elu na - abanye obere njikọ ọla kọpa na - eme njikọ na iji DW-UHF-10 kW induction brazing system na igwe ihe eji eme ihe
DW-UHF-10kw igwe eji eme ihe nkwado
• tubing ọla kọpa - tube ọkpọ
• Tapawa ọla
Ike: 9.58 kW
Okpomoku: Odika 1500 ° F (815 Celsius)
Oge: 5 - 5.2 sek
DW-UHF-10kw usoro induction brazing usoro
• tubing ọla kọpa - Condenser tube
Ike: 8.83 kW
Okpomoku: Odika 1300 ° F (704 Celsius)
Oge: 2 sec
Dịka ọ bụ naanị otu nzukọ ka enyere maka ule a, anyị ji nnukwu mgbidi 5/16 wee wepụta ube nnwale dịka otu tube nabatara nke ọzọ na njedebe oghe emepere emepe. A na-eme atụmatụ oge okpomoku dabere na iji tempilaque agba gosipụta okpomọkụ. Nzukọ a nwalere, (ihe ndị enyere na-esote ya) bụ ndị agbakọtara ọnụ iji mee ihe mkpuchi bras 505 ma tinye ya na foto ụlọ nyocha n'otu foto ndị ahụ agbakwunyere) A hụrụ okirikiri ọkụ 5 - 5.2 sekọnd ka ọ na-agbapụta alloy ma mee nkwonkwo ahụ. .
A na - akpọkọta obere ọkpọkọ (eriri ọkpọ) na - akpọpụta mgbanaka site na alloy braure (solder ọla) na-etinye ma tinye ya na nrutu nke ọdụ abụọ ahụ. Oge okpukpu abụọ nke oge abụọ zuru ezu iji kọọ alloy ma mezue nkwonkwo.
Dịka esi gosipụta, usoro ihe ọkụkụ nke DW-UHF-10kw nwere ike ime ka ikpo oku ma nke ukwu ma nke kacha nta ruo na ngalaba iji mezue nkwonkwo nkwado. Oge ikpo ọkụ site na iji eriri mkpuchi dịnụ dị n'etiti atụmanya oge okpomọkụ chọrọ FLDWX chọrọ
HLQ ga-achọ nzukọ zuru oke maka nyocha iji wee mepụta nke ikpeazụ induction kpo oku oku nke ahụ nwere ike ịnabata nkwonkwo 12 niile akọwara na foto okirikiri nhọrọ ukwuu. Ọ dị mkpa ịmara ma hụ nkọcha n'etiti njikọ nke tube ahụ iji mee ka bra bra na ngalaba nke na-eme ka ihe nchara rụọ ọrụ iji mepụta na ntanetị nke ụlọ RF nke mepụtara na eriri mkpuchi ahụ anaghị emetụta ya. Ihe ngwụcha nke ikpeazụ a nwere ike ịchọ mgbakwunye nke ihe ferrite na eriri igwe nke ga-arụ ọrụ iji gbadobe RF n'ọhịa na-eduga ma ọ bụghị na nchara ụlọ.
Emechara nyocha izizi na DW-UHF-10 kW site na iji mkpokọ ụlọ nyocha dị. Ihe a na - eme ka igwe kporo oku ga - adi n'ime ulo enweghi ihe ga - eme ka onye na - eme oru jiri ya mee ihe ichotara ya na ọla nke na - edenye ya ebe anyi gha aru ike. Nhazi igwe mkpuchi ihe eji emeputa ihe ndi ozo ga - etinye ihe ndi ozo di mkpirisi karie ihe nyocha ule ma ghazie ya ka o gha di mma.
HLQ nwere ike inye usoro ahụ njikwa usoro nhọrọ. Nke a ga - abụ usoro usoro mmemme nke emepụtara nke ga - ewulite maka njikọta nke ọ bụla edepụtara na foto ọgbakọ nke enyere ya na arịrịọ ngwa sitere na FLDWX. A ga-ahazi nkwonkwo iri na abụọ ahụ iji bido n'otu nkwonkwo ọ bụla - nke a ga-eme ka onye ọrụ ahụ ka ọ kwaga n'otu usoro dị ka usoro sitere na nkwonkwo 12 gaa na nkwonkwo 1. Usoro ọ bụla nke induction brazing coil / aka ga-eme ka usoro ahụ si nkwonkwo 12 (oge ọkụ na% nke ike) gaa na njikọta abụọ (oge ọkụ na% ike) wdg n'agbanyeghị nkwonkwo 1. Usoro, ozugbo abanye, ọ ga-adị mkpa ịgbaso usoro ọgbakọ ọ bụla. Nke a ga-ewepụta ọrụ amamịghe oge oge nke braze iji nyeghachi mmeghari na usoro a.
Ọzọ nhọrọ maka ịtụle ga-abụ ịtụle nhọrọ HLQ Robotic Arm. Nhọrọ a na - akwado akwara brazing nke mbu/ mkpuchi ụlọ ma na-eme mgbakọ ahụ mgbe emere ya idebe eriri mkpuchi na mpaghara njikọ ọ bụla. Ogwe aka nkwado na-atụgharị ma na-akpali ụlọ mkpuchi / mkpuchi mkpuchi na ọnọdụ kwesịrị ekwesị na akụkụ maka njikọta ọ bụla na-emesi ọnọdụ ala na oge okpomọkụ.
Categories Technologies Tags ọla kọpa brazing brazing, ọla kọpa braing igwe, sistem ọla kọpa, zuru ike induction brazing, nnukwu brasized tubing brazing, nnukwu ugboro soldering ọla kọpa tubing, braduzed braing braing, na - eme ka eriri nkwonkwo na –eme ihe, obere ọkpọkọ nke ọla kọpa Mail igodo
PDF nke Induction kpo oku Isi na ngwa ndị eji eme ya